Olona ny fahatsapana ny wanderlust haingana dia afaka mahatsiaro ho notrohinao mbamin'ny faikany tamin'ny eritreritra ny mandany ny androm-piainany amin'ny asa izay mitandrina izany amin'ny toerana manokana ho ela be. Fa ireo olona ireo, ny mpifindrafindra fiainana no tsara indrindra.
Raha toa ianao ka iray amin'ireo olona izay tia mikapoka ny lalana matetika, matory ao amin'ny tanàna vaovao, vaovao nanandrana ny sakafo sy ny fianarana momba kolontsaina vaovao, ianao tena tsy te hanao ny asa izay mamela anao hijery ny izao tontolo izao amin'ny teny manokana.
About 42% ny raharaham-barotra boky mpandeha ny trano fandraisam-bahiny mampiasa finday avo lenta ary izany no navelany hotels.ng (an-tserasera famandrihana hotely fanompoana ho an'ny olona mitady takatry ny efitra tahan'ny in Nizeria) mba hamaritana ny sokajy ny raharaham-barotra mpandeha izay mandeha indrindra manerana izao tontolo izao.
Ireto ny ambony 10 asa izay miantoka ny asa ny anao nitsidika ny izao tontolo izao:
Raha taniny asa amin'ny fanatanjahan-tena ny fikambanana ho toy ny fanatanjahan-tena recruiter, Famaritana ny asa dia hitaky anareo mba handeha ho any ara-panatanjahantena hetsika manerana ny firenena ny Skoto ho an'ny talenta vaovao sy fitadiavana.
Mba tena mankafy izany asa, tokony ho liana amin'ny fanatanjahan-tena!
Ve ianao toy ny isa? Ahoana ny hevitra momba ny fitadiavam-bola ara-bola vola mandinika ny rakitsoratra sy ny hetra Info ny fandraharahana manerana izao tontolo izao feo? tsara? Avy eo dia tokony ho ny auditor!
Ny auditors manerana izao tontolo izao no andrasana mitombo ny 11% alohan'ny 2024, satria asa izany dia mitaky anao hanao fiatoana amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao eo amin'ny raharaham-barotra.
Ny karama tsara, ary mahazo handeha matetika noho ny maro-toerana eo amin'ny asa. Mety hahita ianao mandany volana vitsivitsy any amin'ny toerana manokana mba hamita ny fanorenana. Na dia tsy afaka ho lasa mpitantana avy hatrany noho ny fepetra takina, dia afaka mahazo foana ao ho fanohanana mpiasa.
4. Traveling Consultante
Ny mpanolo-tsaina izay rehetra isika hankany orinasa-to lehilahy Raha misy manana olana. Miaraka amin'ny fahalalana manokana, ny asa ho takiana ny firenena manodidina – ary manerana izao tontolo izao. Fitandremana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa sy ny mutualistic mafana dia hitaky anareo tsy tapaka manao fitsangatsanganana.
5. Miasa amin'ny sambo fitsangantsanganana
Miasa amin'ny sambo fitsangantsanganana dia tsy maintsy ho ny iray amin'ireo asa nofy ambony ny olona tia mandeha. Eritrereto izany: ianao hatao ankapobeny aloa mba mandeha izao tontolo izao raha hahazo sakafo sy toerana hatoriana ny trano. Sarotra aza ny maha zava-dehibe ny asa eo amin'ny sambo fitsangantsanganana.
6. Wedding Mpaka sary
Fantatrao toerana rehetra ao amin'ny fampakaram-bady sary Bella Naija? Ny mpaka sary tsy maintsy ho ao amin'ny toerana mba handray ireo tifitra! Inona no mangatsiaka dia? Miaraka amin'ny kalitao tsara fakan-tsary sy ny tsara ho an'ny maso jiro sy ny loko, ianao koa dia afaka mahazo ny velona niara ny mpivady mba haka sary tena mamy.
Tena toy ny fampakaram-bady sary zavatra, dia be ny teny fikasana ho anareo raha zava-nitranga iray pandaharam-potoananao. Mety hanapa-kevitra ny hifantoka amin'ny zava-mitranga ao an-toerana (antoko, fampakaram-bady, fitsingerenan'ny andro nahaterahana) fa ny tena Travel ranom dia tamin'ny fandaminana-pirenena sy iraisam-pirenena toy ny fety hetsika, fihaonambe ka hanao varotra fampisehoana.
8. Ny Corporate anjara asan'ny iray Mpanatanteraka Mpanampy
Raha tsy mampaninona anao, azonao atao ny asa ny maha-ambony sehatra matihanina ny mpanatanteraka mpanampy, izay midika hoe anao ho mandeha tsara afa-tsy ny mpampiasa ho an'ny fandraharahana fitsangatsanganana! Tena tsara izany teknika ho fampaherezana kosa, ny Resume koa!
9. Injeniera teo Amin'ny Fanompoana
Ianao no mandeha-to olona rehefa ilain'ny mpanjifa manampy fametrahana na fanamboarana ny vokatra. Raha toa ianao ka injeniera ho an'ny fanompoana teny amin'ny saha orinasa iraisam-pirenena, ianao be dia be tsy maintsy hijaly sy fampiofanana be dia be ny mandeha toerana mahaliana manerana izao tontolo izao.
10. Mpaninjara mpividy / Mpivarotra
Raharaham-barotra lehibe safidy raha tia lamaody zavatra ary wanderlust: ny retailing amin'ny asa mety ho fiantsoana fotsiny. Buy zavatra tsy fahita firy ao amin'ny firenena iray, mivarotra hafa!
Izany no tsy ny rehetra! Asa hafa tokony handinika Raha tia mandeha fiaramanidina ahitana maha-mpanompo, mpiasa fanampiana iraisam-pirenena, kaomersialy, Travel mpandraharaha, ary Travel mpanoratra.
1 Comment amin'ny "10 Jobs Fa Nizeriana izay te-Travel Round The World"
Kando Andi | March 24, 2016 amin'ny 2:45 PM | navalin'i
ireo dia tena tsara sy mahaliana asa ho an'ny Nizeriana. Amin'ny maha-indonezianina, Mahaliana ahy ny azy ireo, fa indraindray isika tsy mora ny mahazo ireo asa. tsara, Efa niandry ny Next Post. Misaotra